SIDA LOO KORO BOQOSHAADA GURIGA: TILMAAMAHA LOOGU TALAGALAY BILOWGA - MUSHROOMS
Tiknoolojiga sii kordhaya ee guriga
Champignons ayaa muddo dheer qaadanayay boos adag oo ay ka helaan cuntada dad badan. Waxay yihiin dhadhan fiican, si sahlan loo diyaariyo oo la awoodi karo: waxaad ka iibsan kartaa ku dhawaad ​​dukaanka cuntada. Laakiin haddii aad weli go'aansato inaad is-daaweysid naftaada iyo kuwa aad jeceshahay leh boqoshaada guri-dabiiciga ah, waxaad u baahan doontaa aqoon iyo dadaal. Maqaalkeenu wuxuu kuu sheegi doonaa sida leysugu kobcin lahaa lafahaaga.
Nidaamka diyaarinta substrate waxaa loogu yeeraa composting. Marka laga hadlayo champignons, waa adag tahay, sababtoo ah likaha this mid qurub ah oo ciidda iyo cuno kaliya arrinta organic.
Si aad u diyaariso substrate si aad uhesho 100 kg oo ah cawska dahabka ah (qamadiga ama galleyda), 75-100 kg oo ah faras (lo'da) digada ama shimbiraha, 300-500 litir oo biyo ah, 6 kg oo gypsum ama 8 kg oo lime lakulmay.
Cawska waa in la gooyaa dherer ah 15-20 cm oo qoyaan biyo dhawr maalmood si aad u sameyso qoyan. Wixii mashiinka compost ah ee aagga la taaban karo, qoryaha qiyaasaya 1.5 x 1.2 m ayaa la sameeyey. La xiriirka isku dhafka dhulka ama biyaha roobka waa mid aan loo baahnayn, waxaa muhiim ah in laga fogaado gudaha fangaska cayayaanka ee khashinka.
Ma taqaanaa? Burt - keydinta alaabta beeraha ee qaab khafiif ah, oo ku yaalla dhulka ama god, ku daboolay caws engegan, peat ama balka dabka leh habka hawo-gelinta iyo ilaalinta daadadka. Sida caadiga ah khudaarta waxaa lagu kaydiyaa qoryaha (baradhada, xididdo, kaabaj).
Caws iyo digada (qashin) waxay soo saaraan lakabyo 25-30 cm ah, lakabka kowaad iyo kan ugu dambeeya waa inuu ahaadaa caws. Kombiyuutarka ugu sarreeya ayaa lagu dabooli karaa filim, laakiin dhinacyadu waa inay noqdaan godadka hawada.
Isbuucyada soo socda ee isku dhafan waxaa jira nidaam halsano ah (gubid), inta lagu guda jiro ammonia, carbon dioxide iyo uumiga biyaha ayaa la sii daayaa, heerkulada qoorta waxay gaari kartaa 70 ° C. Inta lagu jiro wakhtigan, waxaad u baahan tahay inaad disho 3-4 jeer.
Taageerada ugu horreysa waxaa lagu sameeyaa 6-7 maalmood, lime ama gypsum ayaa sidoo kale lagu daraa isku dar ah.
Substrate diyaar ah - waa miisaan la isku mid ah oo midabkiisu yahay midab madow, urka ammonia ayaa ka maqan. Haddii uu isku daro qoyan, waa in la kala filiqiyaa waxoogaa yar oo qalalan oo mar kale ku dhufo. Soo saarka waa 200-250 kg oo substrate ah, taas oo u dhiganta 2.5-3 mitir labajibbaaran. M aagga loogu talagalay boqoshaada sii kordhaya.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan rabin inaad wax ka qabato diyaarinta substrate, waxaad iibsan kartaa compost-ka samaysan. Qaybaha compost horey loogu beeray mycelium waxay ku jiraan suuqa. Way sahlan yihiin in la qaado, filimkana yaraa wuxuu ka ilaaliyaa compost ka soo sababa dabiiciga ah.
Waa muhiim! Qaar ka mid ah makhaayadaha ayaa bixiya xirmo diyaar ah oo loogu talagalay beerista champignon, oo ka kooban substrate, mycelium iyo lakabka casing.
Qaadashada mycelium (mycelium) champignon
Maanta ma aha wax adag in la helo mycelium likaha. Bogagga shabakadu waxay ka buuxsamayaan xayeysiisyo loogu talagalay maadooyinka kala duwan iyo qaybaha qiimaha kala duwan. Way adag tahay in la doorto waxyaabo tayo sare leh oo tayo sare leh.
Miisaanka maqaarka oo qoyan - Tani waa mycelium, waa sidaha loo karkariyey oo la nadiifiyey. Mycelium of champignon waxaa badanaa laga soo saaraa miro dheeha, taas oo marxaladda ugu horreysa ee horumarka ay bixisaa nafaqo loogu talagalay mycelium.
Mycelium Grain waxaa lagu iibiyaa bacaha balaastigga oo leh gaas isku bedelan gaas. Mycelium miro wanaagsan oo hufan ayaa si caadi ah u koraya (caddaan) dhinacyada oo dhan waxana uu leeyahay ur murqsan. Cagaar yar ayaa muujinaysa joogitaanka fangaska caaryada ah, iyo urta dhanaantu waxay muujinaysaa cudurka infakshanka bakteeriyada.
Heerkulka qolka iyo baakad xiran, mycelium badarka waxaa lagu kaydiyaa 1-2 toddobaad, iyo qaboojiyaha ilaa 3 bilood. Ka hor intaan la beeri, mycelium lagu keydiyo qaboojiyaha waa in lagu hayaa heerkulka qolka maalin maaliyadeed iyadoon la furin xirmada si ay ula qabsato mycelium ka hor intaysan dhicin substrate diiran.
Mycelium compost waa compost ah kaas oo boqoshaada koray iyo taas oo ah gudbiye mycelium ah.
Ma taqaanaa? Mushaharro badan oo tayo sare leh oo loogu talagalay taranta ayaa lagu sameeyaa shaybaarro gaar ah.
Qulqulka isku dar ah ee caarada mycelium
Ka hor intaanad shaqada bilaabin wax soo saarka champignons gudaha guriga, waxaad u baahan tahay inaad qaaddo daaweyn ka dhan ah dulinka iyo caaryada. Tusaale ahaan, waxaad ku nadiifin kartaa saqafka iyo derbiyada la nadiifiyo leh lime iyo sulfate copper. Ka dib markii tallaabooyinka la qaaday, qolku waa in la nuugo.
Wixii beerista hiwaayadda ee boqoshaada ku filan 3 square. Sanduuqyada loogu talagalay champignons si loo keydiyo booska waxaa lagu dhejin karaa gidaarrada.
Substrate ayaa la dhigaa weel iyada oo leh dhumuc of 25-30 cm, wax yar tartiib tartiib ah. Qiyaasta qiyaasta isticmaalka substrate waa 100 kg halkii 1 sq. m
Waa muhiim! Qayb ballaadhan oo ballaaran ayaa loo qaybin karaa dhawr jajab: mid loo isticmaalo qandhada a mycelium, tan labaad ee loogu talagalay jidhka miro, iyo saddexaad ee diyaarinta substrate ah.
Qalliinka mycelium (mycelium)
Miraayad caan ah ayaa si fudud loo beeray oo daboolay lakabka substrate 5 cm qaro weyn.waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa godadka 4-5 cm qoto dheer, kor u qaadidda ciidda leh god, halkaas oo ah caan miro ah ama mycelium compost la dhigo.
Marka mycelium uu bilaabo inuu koro, tani waxay dhici doontaa 1-2 toddobaad, dusha sare ee substrate waa in la daboolaa lakabka 3-4 cm ee ciid sare. . Gaaska gaas ee u dhexeeya hawada iyo compost waxay kuxirantahay qaab dhismeedka lakabka casing.
Waxaad dabooli kartaa ciidda adiga ayaa kuu sameyn karta ama diyaar u ah. Diyaarinta isku dhafka guriga waxaad u baahan doontaa 9 qaybood oo ah peat iyo qayb ka mid ah jeesada ama 5 qaybood oo ah peat, 1 qaybood oo cawl, 4 qaybood oo dhul beerta ah. 1 kiiloomitir. a m aad u baahan tahay inaad qaadato 50 kg oo dabool ah.
Ma taqaanaa? Qiyaasta isticmaalka mycelium wuxuu yahay 350-400 g halkii 1 sq. m for grain iyo 500 g halkii garaac. m loogu talagalay compost.
Xakamaynta heerkulka iyo daryeelka ilkaha ee koritaanka
Hoyga aad ka heli karto boqoshaada cusub sanadka oo dhan. Qolku waa inuu ahaadaa mid nadiif ah oo laga xiro arrimo dibedda ah, oo la doorbido dabaqa dabaqa ah. Mushrooms uma baahnid iftiin, laakiin hawo wanaagsan ayaa lagama maarmaan ah, laakiin lama qori karo.
Xilliga kuleylka, maqaasiinka, qolalka, qolalka, qolalka, qolka garoomada, iyo meelaha qashinka lagu dhaqaajin karo waxaa lagu hagaajin karaa qoryaha koraya, halkaasoo heerkulka lagu hayo 16-25 ° C iyo qoyaanka hawadu waa 65-85%. Heerkulka mudadaas waxaa lagu bedeli karaa hawo-qaadid. Qoyaanku waa la isku-hagaajin karaa iyada oo lagu buufin karo (si kor loogu qaado) ama hawo-qabasho (hoos u dhigo).
Xilliga qaboobaha, qolalka qaxoontiga leh ee leh heerkulka la hagaajin karo ayaa ku haboon, maaddaama kuleylka dheeraadka ah loo baahan yahay.
10-12 maalmood ee ugu horreeya ka dib marka la beerto qolalka mycelium, heerkulka waa in lagu hayaa 25 ° C. Marka mycelium ballaariyo, heerkulka waa in la yareeyo 18-20 ° C, oo intaa sii dheer lagu hayo 16-20 ° C.
Waa muhiim! Si loola socdo heerkulka iyo qoyaanka qolka meesha uu boqoshaada koray, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto heerkulbeegga iyo hygrometeriga.
Cunnooyinka borotiinka ayaa mararka qaar loo isticmaalaa si loo kordhiyo qiimaha nafaqada ee compost. Qaar ka mid ah ayaa lagu soo bandhigay substrate inta lagu guda jiro beereeyda mycelium, kuwa kale - ka hor inta aan la daboolin lakabka caag ah ee compost ku baxda ee mycelium.
Maydhayaasha ugu horreeya waxay u muuqdaan 35-40 maalmood kaddib marka la beero mycelium.
Mushrooms lama jarin, sida aynu u isticmaalnay kaynta, xaq waxay ku ururiyaan iyaga oo isku xoqaya. Waxay yihiin fungus caag ah oo aan lahayn nidaam xidid, mycelium ee kiiskan ma waxyeello, a fangas cusub oo dhawaan u koraan meeshan. Laakiin hadhaaga ee boqoshaada jarjaraya way qudhmi karaan, soo jiidashada cayayaanka.
Goobaha banaan ka dib goosashada waa in lagu daboolaa ciid daboolan oo si fudud u waraabiyo. Waxsoosaarkii champignon bishii - ilaa 10 kg halkii 1 sq. Ka dib markii goosashada, ka dib markii 1.5-2 toddobaad, boqoshaada mar kale soo muuqan.
Beerashada Mushroom ee guriga ma fududa, mararka qaarkood ma ahan mid aad u fiican. Laakiin natiijada foomka ka mid ah goosashada qani ku ah boqoshaada udgoon leh iyo dhadhan fiican ee miiskaaga ama iibinta xaqiiqda oo dhan dadaalka.